ऐश्वर्या रायले पेरिस फेसन वीकमा र्‍याम्पमा हिँड्दा दुनियाँको धड्कन् रोकियो आखिर के छ त्यस्तो ? – Sunaulo Nepal TV
ऐश्वर्या रायले पेरिस फेसन वीकमा र्‍याम्पमा हिँड्दा दुनियाँको धड्कन् रोकियो आखिर के छ त्यस्तो ?
नयाँ दिल्ली । ऐश्वर्या राय बच्चन, बलिउड को सबैभन्दा प्रसिद्ध र सुन्दर अभिनेत्रीहरु मध्ये एक हुन् । उनी अझै पनी करोडौंको मुटुमा राज गर्छिन् । एक पटक फेरि उनले आफ्नो शैलीबाट प्रशंसकहरुको धडकन रोकिएको छ ।
पेरिस फेसन वीकमा र्‍याम्पमा हिँडेकी उनी एक परी भन्दा कम देखिएनन्, जो कोहि उनीहरुलाई देख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फैशन ब्रान्ड ‘लोरियल पेरिस’ को ब्रान्ड एम्बेसेडर ऐश्वर्या राय पेरिस फेसन वीकको र्‍याम्पमा हिँड्ने बित्तिकै सबैको नजर उनीतिर गयो । ऐश्वर्याको लुक सेतो गाउन, खुला कपाल र मेकअपमा हेर्न लायक छ ।
उनले एक उज्ज्वल गुलाबी लिपस्टिक संग आफ्नो लुक पूरा गरेकी छिन् । गायिका र अभिनेत्री क्यामिला काबेलो, अष्ट्रेलियाली स्टार क्याथरीन ल्याङ्गफोर्ड, अभिनेत्री अजा नाओमी किंग, हलिउड स्टार एम्बर हर्ड र गेम अफ थ्रोन्सका अभिनेता निकोलाज कोस्टर–वाल्डौ पनि फेसन शो मा भाग लिईन् ।
ऐश्वर्याको सौन्दर्य सबैको भन्दा उत्कृष्ट देखिन्छ । वास्तवमा ऐश्वर्या दुई बर्ष पछि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम को एक हिस्सा बनेकी हुन् । कोरोनाका कारण उनी बाहिर जान सकेकी थिइनन् । पेरिस जानु अघि उनी पति अभिषेक बच्चन र छोरी आराध्यासंग मुम्बई विमानस्थलमा देखिएकी थिइन् ।
Previous बच्चा जन्माएको भिडियो प्रियंकाले आफैँ सार्वजनिक गरिन् (भिडियो हेरौँ)
Next परिणीति चोपडा, अनुपम खेरसहित भारतीय कलाकार काठमाडौंमा